IDA izoluyisa enkantolo olwama-etoll eWestern Cape | News24
IDA izoluyisa enkantolo olwama-etoll eWestern Cape
Cape Town – IDemocratic Alliance izwakalise ukuthi izobabela eNkantolo ePhakeme yaseWestern Cape yokuvimba isinqumo sakwaSanral sokufaka ama-etoll ezingxenyeni ezithize emigwaqweni enguthelawayeka u-N1 no-N2 ngokusho kombiko.
Ngokubika kweFin24 ngenyanga eyedlule isikhulu esiphezulu sakwa-SA National Roads Agency uNazir Alli utshele iCape Chamber of Commerce and Industry basezinhlelwe zokufaka ama-etoll kwezinye zezingxenye zale migwaqo eWestern Cape.
Idolobha laseKapa lizwakalise ukukhathazeka mayelana nokuthi ukufakwa kwala ma-etoll kuzoba namuphi umthelela kwezomnotho.
OLUNYE UDABA: Kushoda uphethiloli eGoli
Ilungu lekomidi leMeya kwezokuthutha uBrett Herron uthe uSanral awuzane uyenze le migwaqo yaba sesimweni sokufakwa ama-etoll eKapa.
“Sizosiphikisa lesi sinqumo esenziwe i-CEO yakwa-Sanral ngoba ubengagunyaziwe ngaso.”
Okhulumela uSanral uVusi Mona ngo-Ephreli uthe “kuphambene” ukuthi u-Alli wathatha lesi sinqumo eyedwa njengoba sathathwa ezingeni longqongqoshe.
UMona uthe ingxenye yale migwaqo isesimweni esingagculisi ngakho uSanral ufuna ukungenelela uqale ukuwusebenze ngokushesha.